ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: August 2010
ရမ်းကုတစ်ဦးသည် အပြင်းဖျားနေသော လူနာတစ်ဦးအား တာဝန်ယူကုသနေပြီး လူနာရှင်အမျိုးသမီးကိုလည်း မစိုးရိမ်ရန်နှင့် မကြာမီပျောက်ကင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေလုံးထွားထွားဖြင့် အားပေးလျက်ရှိသည်။
လူနာရှင်။ ။ဆရာ။ ကျွန်မယောကျာ်းအခြေအနေလေး သိပါရစေ။
ရမ်းကု။ ။ဘာမှမပူနဲ့။ Temperature ကနော်မယ်ပဲ။ မကြာခင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ဘယ်အချိန်မေးမေး ထိုသို့သာပြောနေပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် လူနာသေဆုံး သွားလေဧ။် ။ ရမ်းကုလည်း အလောင်းပြင်ဆင်ရာသို့ မကောင်းတတ်၍ ရောက်လာရာ လူနာရှင် အမျိုးသမီးမှ ကိုကြည့်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းပြောလေတော့သည်။
"ဆရာပြောတော့ တန်ပရေချာက နော်မယ်ဆို အခုရေချိုးပေးတော့ "ရှဲ" ကနဲ မြည်ပြီး အငွေ့တွေတောင် ထွက်နေသေးရဲ့။"
ရည်စားအများကြီးထားဖူးသော်လည်း ယခုထိမစွံနိုင်သေးသော လူပျိုကြီးတစ်ဦးသည် လက်ရှိချစ်သူနှင့် အတူဘတ်စ်ကားပေါ်သို့ တတ်လိုက်သည်။ စပယ်ယာမှ ယာဉ်စီးခ လာ တောင်းရာ လူပျိုကြီးသည် သူ့အတွက်သာထုတ်ပေးရင်း ချစ်သူဘက်ကိုလှည့်ကာ-
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, August 31, 20106comments:
ရေလှူသော အကျိုး ဆယ်ပါး
၄။ မွတ်သိပ်ခြင်းမှ ကင်းခြင်း၊
၁။ အာယု - အသက်ရှည်ခြင်း
၂။၀ဏ္ဏ - အဆင်းလှခြင်း
၃။ သုခ - ချမ်းသာကြီးခြင်း
၄။ဗလ - ခွန်အားကြီးခြင်း
၅။ ပဋိဘာန - ညဏ်ပညာကြီးခြင်း။
ပုံကို http://cmummstudents.files.wordpress.com/2008/11/ad_water_02.jpg မှကူးယူပါသည်.
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, August 28, 20105comments:
သွေးပေါင်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့. . .
ခုတစ်လော မိုးရာသီဆိုပေမယ့် မိုးမရွာလို့ ရှိရင် အရမ်းပူပါတယ် အဲဒီတော့ ချွေးထွက်တွေများပြီး သွေးတိုးမရှိတဲ့ လူတွေ က သွေးပေါင်အရမ်းကျ ကျပါတယ်. . . သွေးတိုးရင်တော့ သွေးပေါင်ကျအောင် လုပ်ရသလို သွေးပေါင်ကျရင် လည်း သွေးပေါင်ပြန်တက်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်. . ဒါပေမယ့် မကျခင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကိုသိထားရင် လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်.
မုန်လာဥ အစိမ်းကိ ဖျော်ရည်လုပ်၍ သောက်ခြင်းသည် သွေးတွေးကျစေရန် သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းရန် အလွန်အကျိုးရှိသော ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်. . . မုန်လာဥဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးပါ. . . အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝစေဖို့အတွက် ပရိုတင်း၊ ဗိုက်တာ မင်စီနဲ့ ဘီအုပ်စုများပါဝင်တဲ့ အစာများကို မှီဝဲခြင်းက သွေးအတက်အကျကို ကာကွယ်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်..
သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ ဆားကို အသုံးပြုပေးပါ. . . သွေးပေါင်ချိန် ပုံမှန်ရှိသူ တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဆားပါဝင်သော အစားအသောက်ကို စားသုံးပေးပါ . . ဆားလက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဝက်ခန့်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်နှင့် ဖျော်၍ နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးလျှင် ကောင်းမွန်ပါတယ်.
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလျှင်လည်း သွေးပေါင်ချိန်ကျစေပြန်ပါတယ်. . . . သွေးပေါင်ချိန်ကျနေသော လူကို အရည်များများ ၀င်နိုင်သမျှ ၀င်အောင် တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမှ ကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်...
အကယ်၍ သွေးပေါင်တိုးနေပါက မိသားစုဆရာဝန်ထံမှာ အကြံညဏ်ရယူပြီး သင့်တင့်မှန်ကန်သည့် ဆေးဝါးသောက်သုံးမှု ၊ ကုသမှု ယူသင့်ပါတယ်. . . .မိမိဘာသာ ဆေးများ သောက်သုံးခြင်း ၊သောက်ရသည့် ပမာဏထက်ပို၍ သောက်ခြင်းများကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါ. ..
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, August 25, 2010 1 comment:
စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ဘ၀မှာ ရှိတာလေးတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပြီး သူများတွေမှာ တော့ ရှိလိုက်ကြတာဆိုပြီး သောကပွား မနေကြပါဘူး ကိုယ့်မှာမရှိတာ ကိုယ်မရနိုင်တာတွေကို တမ်းတမနေပဲ ကိုယ့်မှာရှိတာကိုပဲ တန်ဖိုးထားတတ်မယ် ဆိုရင် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ဆထက်ထမ်းပိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်.
လေးနှစ်သမီး အဲလစ္စဟာ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို သွားကြည့်လိုက်တော့ အံ့သြစရာ လက်ဆောင်လေးတွေ ချိတ်ထားတာ တွေ့တယ် သူငယ်ချင်းအချို့နဲ့ နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲလစ္စရတဲ့ လက်ဆောင်က နည်းနည်းလေးပါ. . အဲလစ္စ အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေလည်း ပါတာမဟုတ်ပါဘူး . . အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးမလေးအနေနဲက လက်ဆောင်တွေ ဒီထက် ပိုများရင် ကောင်းမှာပဲ လိုချင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေကျတော့ မရဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်. . . ဒါပေမဲ့ အဲလစ္စကတော့ သူ့ရှေ့မှာရောက်လာတဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်တွေကိုကြည့်ပြီး အံသြ၀မ်းသာစိတ်နဲ့ ပီတိတွေ ဖြစ်နေပါတယ်.
ကျွန်မတို့ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်း ကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်တဲ့ အခါ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ကိုယ့်မှာမရှိတာ၊ ကိုယ်မရနိုင်တာတွေကိုပဲ စဉ်းစားနေမိကြပါတယ်. . . အဲသည်လို အာရုံထားပြီး တွေးတဲ့အခါ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုလည်း မရနိုင်ပါဘူး . .
ခုနက အဲလစ္စ လေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ. . . ကိုယ်က ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ အဲလစ္စနောက်ကို သွားပြီး သူမရလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်တွေအကြောင်း သွားပြီး သတိပေးဦးမလို့လားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ. . ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်မရခဲ့တဲ့ ဟာတွေအကြောင်း မစဉ်းစားတော့ဘဲ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာတွေအကြောင်းပဲ ပြန်စဉ်းစားဖို့ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ . . တွေးကြည့်ဖို့ပါ..
အချမ်းသာဆုံး ၊အရှိဆုံးဆိုတဲ့ သူတွေဟာ အဆင်းရဲဆုံး ဆိုသူတွေ ပျော်သလောက် ပျော်ကြတာပါပဲ . . ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကိုပဲ နှစ်သက်ကျေနပ်နေတဲ့ သူတွေဟာ အမှန်တကယ် အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ သူတွေထက် နှစ်ဆလောက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ မှုကို ရရှိခံစားနိုင်ကြပါတယ်
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, August 22, 2010 10 comments:
ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှု ကို မုချလိုချင်ရင် ကံ၊ ညဏ်၊ ၀ီရိယ သုံးမျိုးပေါင်း ပြီးကြိုးစားရပါတယ်. . . ညဏ်ကို အရင်သုံး ၊ ဒုတိယ ၀ီရိယတွဲ၊ ညဏ်ရှိပြီး ၀ီရိယ မရှိလည်း အလကားပါ. . . . သုံးမျိုး စလုံးကို တွဲနိုင်ရင်တော့ မလွဲမသွေ အောင်မြင်မှုကို ရရှိမှာပါ.
ကံ၊ညဏ်၊၀ီရိယ သုံးမျိုးတွဲပြီး အသုံးပြုလို့ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ကြောင်းကို မုဆိုးသုံးယောက်ရဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်နဲ့ သာဓက ပြပါ့မယ်. .
မုဆိုးသုံးဦးမှာ တစ်ဦး က လုံ့လ၊ ၀ီရိယ၊ ဇွဲသမား ဇွဲကြောင့် သားကောင်ရတယ်. . တစ်ဦးက ကံသမားပဲ . . ဆယ်ခါတစ်ခါ သားကောင်ရတယ်. .. တစ်ယောက်ကတော့ ကံရော၊ လုံ့လ ၀ီရိယရော ၊ညဏ်ရော သုံးတယ်.
သူတို့ သုံးဦးကို ဘုရင်က သားကောင်အရ ပြိုင်ခိုင်းတယ်. .. ငါးရက်မှာ သားကောင်အရများသူကို အနိုင်ပေးမယ် လို့ ပြောပြီး တောနက်ထဲကို လွှတ်လိုက်တယ်. .
ဇွဲသမားက တောထဲရောက်တာနဲ့ မနားမနေ သားကောင်ရှာတာပဲ ၊ တောနက်ချုံနွယ်ကို မောကြီးပန်းကြီးတိုးတယ်. . သူဟာ တော်တော်နဲ့ သားကောင်မရဘူး . . . ဇွဲကြောင့် လမ်းမှာ သုံးရက်ကြာမှ သမင်တစ်ကောင်သာရတယ်. .
ကံသမားကတော့ အေးအေးပဲ၊ ကံကောင်းရင် ရမှာပဲ ဆိုပြီး ပါလာခဲ့တဲ့ သေရည်ကို မော့လိုက်. . သားကောင်သံ နားစွင့်လိုက် အနံ့ခံလိုက်နဲက လုပ်နေတာ လေးရက်မှာ ချေတစ်ကောင်ရတယ်. . .
ညဏ်သမားကတော့ သုံးရက်မှာ သားကောင် ကိုးကောင်ရနေပြီး ငါးရက်ပြည့တော့ နေပြည်တော်ကို အသီးသီးပြန်လာကြပါတယ်. .
ဘုရင်ကြီး က အကြောင်းစုံ ကို အသီးသီး မေးမြန်းပြီး သုံးတဲ့အခါမှာ အများဆုံးရတဲ့ မုဆိုးကို ရွာသုံးရွာစားခွင့် ပေးပြီး တိုင်းသူပြည်သားများကို ဆုံးမစကား တစ်ခွန်းပြောတယ်.. .
မုဆိုးကျော်ဟာ မြှားပစ်တော်ရုံသာမဟုတ် ညဏ်ပညာတော်သူလည်းဖြစ်တယ်. . . သူဟာ ညဏ်သုံးပြီး တိရစ္ဆာန် ရေသောက်ချိန်ကိုသိတယ်. . . ရေသောက်ချိန်မှာ ရေကန်ကနေ ချောင်းမြောင်းစောင့်တယ်. . .အစာရှာထွက်ချိန်၊ အိပ်တန်းပြန်ချိန် သူ့အချိန်နဲ့ သူနေရာဒေသာကို ညဏ်နဲ့ ယှဉ်သုံးတယ်. . ပြီးတော့ သူမကောင်းမှု လုပ်ပေမယ့် အဲသည် လုပ်ချိန်မှာ သေရည်ကို မသောက်သုံးဘူး. .
လူဆိုတာ ကံနဲ့ ၀ီရိယကို သာ သုံးနေလို့မဖြစ်ပါဘူး ၊ ညဏ်လည်းသုံးရတယ်. . ညဏ်မပါ ဘယ်ဟာမပြီးလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်. . . . အရာရာမှာ ညဏ်နဲ့ ယှဉ် ကြိုးစားရမယ်လေ. . အောင်မြင်မှု အပြည့်အ၀ ရအောင် ကြိုးစားခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကံရယ်၊ ညဏ်ရယ်၊ ၀ီရိယရယ် ယှဉ်ပြီးတော့ ကြိုးစားရပါမယ်.
ရေးသားသူ may16 at Friday, August 20, 20107comments:
လန်ဒန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အေဂျင်စီမှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များအရ အစာအိမ်တုပ်ကွေး (Stomach flu) လို့ လူသိများနေတဲ့ Norovirus နိုရိုဗိုင်းရပ်စ်မမာဏ တိုးပွားများပြားလာနေကြောင်း သိရပါတယ် နိုရိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ အလွန်လျင်မြန်စွာ ကူးစက် ပျံ့ပွားလွယ်တဲ့အတွက် အစိုးရဌာနများက ပြည်သူလူထုအား အစာမစားမီနှင့် အစားအစာကို ပြင်ဆင်မချက်ပြုတ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် ကောင်းစွာ ဆေးကြောပြီးမှ ကိုင်တွယ် စားသောက်ကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လျက်ရှိပါတယ်.
နိုရိုဗိုင်းရပ်စ်ကို အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းစေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလို့လည်း လူသိများပါတယ်. . ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ဝေဒနာများကို ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်. . . အဲဒီဝေဒနာတွေကောတ့ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းလျောဝမ်းပျက် ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိုဝေဒနာများကို အနည်းဆုံး ၁၂ နာရီမှ အများဆုံး ၁၀ရက်တိုင်အောင် ခံစားရလေ့ရှိတယ်ဟု သိရပါတယ်.
ထိုဝေဒနာများ ခံစားရတဲ့အခါ ကြွက်တက်ခြင်း ၊ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ့ခြင်းတို့အပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ကြီးကျယ်တဲ့ အခြား ဝေဒနာများ ခံစားရတတ်ပါတယ်. . လူအများစုကတော့ ခပ်မြန်မြန် ပြန်ကောင်း သက်သာလာကြပါတယ်. . သို့သော် အလွန် ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေး များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာ ဖြစ်ပွားခံစားရပါက အသက်အန္တရယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိပါတယ်
ဒီရောဂါကို ကုသမှုကတော့ အိမ်မှာပဲ နေထိုင်ပြီး အနားယူ ရေများများသောက် ၊ ဖျော်ရည် များများသောက်၊ အခြားသူများနှင့် မတွေ့ဆုံကြဘဲ. . . အိမ်ထဲတွင် အနားယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. . . ဒါကြောင့် အစာမစားမီနှင့် အစာစားပြီး လက်ကို သေချာသန့်ရှင်းစွာ ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်..
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, August 18, 20104comments:
အနောက်ဘက် တောင်တန်းဒေသတစ်နေရာမှာ ယာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ မြင်းကြီးက မြင်းပိုင်ရှင် ယာသမားရဲ့ ယောက္ခမကြီးကို ကန်မိလို့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်.. .
ဈာပနချတဲ့နေ့မှာ အလွန်ကြီးမား များပြားလှတဲ့ တက်ရောက်သူ ပရိသတ်လူအုပ်ကြီးနဲ့ စည်ကားနေတာပေါ့ . . ထူးဆန်းနေတာက ပရိသတ်အားလု့း က ယောကျာ်းသားတွေချည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ. . . ဒီတော့ တရားဟော ဓမ္မဆရာ ဘုန်းတော်ကြီးက ယာသမားကြီးကို တအံ့တသြနဲ့ မေးရပါတော့တယ်.
"ခု . . . ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဘွားကြီးက အတော်ကို ထင်ရှား ကျော်ကြားလို့ပဲဖြစ်ရမယ်. . ကြည့်စမ်း လူတွေ သူတို့ အလုပ်ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး ဒီဈာပနပွဲကို လာကြတယ်လေ. . . . ဟုတ်တယ်မို့လား . . . ."
"ဒီလူတွေ ဈာပနပွဲကို လာကြတာမဟုတ်ဘူး . . .ဖာသာကြီးရဲ့ . . ကျွန်တော့ရဲ့မြင်းကြီးကို ၀ယ်ချင်လို့လာကြ တာပါတဲ့. . . . "
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, August 15, 20104comments:
သူ့တွင် အပြစ်၊ ရှိသည်ဖြစ်လည်း
သူ၌ စီးပွား၊ ပျက်ဘိငြားမှ
ချိန်စက်နှိုင်းရှည့် ၊ စာနာဘိလျက်
ငြိမ်းအေး ရွှင်လန်း၊ မေတ္တာပန်းတို့
"လောဘ ဒေါသ၊ မောဟ ဇရာ
ဇာတိ မရဏ၊ ပရိဒေ၀နှင့်
သောက ဒုက္ခ၊ ဒေါမဿ
"သမုဒ္ဒရာရေ၊" "ပင်လယ်ရေ "တည့်
ရေနှင့်ဥပမာ ၊ နှိုင်းပြုပါသော်
ရေဟူသမျှ ၊ အေးငြိမ်းလှသည်
သြော် "ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင်"
ရေများ ထာဝရ ကိန်းပါစေ။
ရေးသားသူ poemflower at Friday, August 13, 20106comments:
တစ်ခါက ဥရောပတိုက်ဘက်မှာ ဘုရင်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့. . . အဲဒီဘုရာဟာ သူ့ဥယာဉ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပန်းပင်တွေ ၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ စကားပြောလေ့ရှိတယ်. . . သူဟာ ဥယာဉ်ထဲရောက်တဲ့ အခါတိုင်း အပင်တွေကို အရမ်းပွင့် အရမ်းသီးခိုင်းလေ့ရှိတယ်..
တစ်နေ့မှာ သူဟာ ဥယာဉ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားတော့ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးဟာ ညှိုးပြီးခြောက်နေတယ်. . ဒီတော့ "ဘာဖြစ်တာလဲလို့ ဘုရင်ကြီးက မေးလိုက်တယ်. . . . ၀က်သစ်ချပင်ကြီးက "ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတုံး . . . ကျုပ်က ထင်းရှူးပင်ကို တုပြီး အပေါ်ကို တက်တော့ ထင်းရှူးပင်မဟုတ်လေတော့ အမြစ်အားက မခံနိုင်တော့ သေတာပေါ့ လို့ပြောတယ်. . . " ဒါနဲ့ ထင်းရှူးပင်ဆီကို သွားပြန်တော့. ထင်းရှူးပင်ကြီး ကကိုင်းပြီးကွေးကျနေတယ်. . . ဒီတော့ ထင်းရှူးပင်ကြီးက "ကျုပ်ကလည်း စပျစ်ပင်ကြီးကို အားကျ ပြီး အသီးတွေ အရမ်းသီးလိုက်တယ် . . . စပျစ်ပင် မဟုတ်လေတော့ မခံနိုင်တော့ဘဲ ခုလို အရမ်းကွေးသွားတာပေ့ါလို့ . . . "ပြောတယ်. . .
အဲဒီတော့ ဘုရင်ကြီးက စပျစ်ပင်ဆီ ကိုရောက်ပြန်ရော. . စပျစ်ပင်ကြီးကလည်း သေမလိုဖြစ်နေတာကို တွေ့တော့ "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ . . ." "ကျုပ်က နှင်းဆီပင်ကို အားကျပြီး သူ့လိုလိုက်ပြီးပွင့်တာဗျို့. . . အဲဒီတော့ စပျစ်သီးလည်း မသီးတော့ဘူး ၊ နှင်းဆီပန်းလည်း မပွင့်တော့ဘဲ ခုလို သေလုမျောပါးဖြစ်သွားရတာပါပဲလို့. . . . "ပြောတယ်..
အဲဒီမှာ ဘုရင်ကြီးက ဆက်လျှောက်သွားတော့ အပင်လေးတစ်ပင်ကိုတွေ့တယ်. . အပင်က သိပ်မကြီးပါဘူး အရွက်ကလေးတွေ ၊ အကိုင်းအခက်ကလေးတေါ လည်း စိုစိုပြေပြေနဲ့. . . အပွင့် က ရနံ့လေးတွေလည်း သင်းပျံ့လို့. . အဲဒီအပင်ရဲ့ အမည်က Heart-Ease နှလုံးအေးချမ်းပန်းလို့ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ အပင်ကလေးပါ. . . ဘုရင်ကြိးဟာ အဲဒီအပင်လေးကို ကြည့်ပြီး "ငါ့ရဲ့ ဦးယာဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ အပင်တွေ သေတာတွေ သေကုန်ပြီ အချို့လည်း သေလုမျောပါး ဖြစ်နေပြီ . . .နှလုံးအေးချမ်းရယ် မင်းကတော့ ရှင်သန်စိုပြည်နေပါလား ဘာကြောင့်လဲ လို့မေးလိုက်တယ်. . . "
အဲဒီမှာ အပင်လေးက "အသင်မင်းကြီး ကျွန်ုပ်ကို ဒီဥယာဉ်ထဲမှာ စိုက်ကတည်းက နှလုံးအေးချမ်းကို နှလုံးအေးချမ်းလိုပဲ ဖြစ်စေချင်ပုံရပါတယ်. . . . ၀က်သစ်ချပင်လို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး . . ဒါကြောင့် ၀က်သစ်ချပင်ကိုလည်း အားမကျခဲ့ပါဘူး. . . ထင်းရှူးပင် မြင့်မြင့် ကြီးကိုလည်း အားမကျခဲ့ပါဘူး. . အသီးတွေ ပြွတ်နေအောင် သီးတဲ့ စပျစ်ပင်ကို လည်း အားမကျခဲ့ပါဘူး. . . . အပွင့်ကြီးတွေ ဝေဆာနေတဲ့ နှင်းဆီပင်ကိုလည်း အားမကျခဲ့ပါဘူး. . . နှလုံးအေးချမ်းဟာ နှလုံးအေးချမ်းလိုပဲ ရှင်သန်ခဲ့တယ်. . . . ဒါကြောင့် နှလုံးအေးချမ်းအဖြစ် နဲ့ပဲ ရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်တာပေါ့ လို့. . . . " ပြောလိုက်ပါတယ်..
ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေများနေမယ်ဆိုရင် အပေါ်က ပုံပြင်လေးလိုပဲ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ လမ်းခုလတ်မှာတင် ကိုယ်လိုရာပန်းတိုင်ကို အရောက်မလှမ်းနိုင်ပဲ. . . . လှေလှော်ရင်း လှော်တက်ကျိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်. . . မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကို တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့. . . လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, August 11, 20105comments:
ဘုရားအလောင်း ဆံတော်ပယ်၍ ရဟန်းပြုတော်မူပုံ
သန်းခေါင်အခါ၌ တောထွက်တော်မူလာသော ဘုရားအလောင်းသည်နံနက်လင်းသောအခါ "အနော်မာ " မြစ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်တော်မူ၍ ကဏ္ဍကမြင်းတော်အစွမ်းဖြင့် ရှစ်ဥသဘ ဝေးကွာသော ဟိုဘက်ကမ်းသို့ ကျော်လှမ်းတော်မူလေသည်။ ထို့နောက် ဆင်ဝတ်တော်မူ သောတန်ဆာနှင့်မြင်းတော်ကို ဆန္နအားအပ်၍ တိုင်းပြည်သို့ပြန်ကြတော့ဟု စေလွှတော်မူပြီး လျှင် အနော်မာသောင်အပြင်ဝယ် သန်လျက်ဖြင့်ဆံတော်မြတ်ကို ပယ်ဖြတ်တော်မူလေသည်။
ထိုသို့ပယ်၍ "ဘုရားဖြစ်မည်မှန်လျှင် ဆံတော်သည် ကောင်းကင်မှာတည်ပါစေသား" ဟု ဓိဠာန်၍ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ဝယ် စူဠာမဏိစေတီ တည်ထားလေသည်။ ထို့နောက် ဃဋိကာရဗြဟ္မာ ဆက်ကပ်လာသော သင်္ကန်းဖြင့် ရဟန်းပြုတော်မူ၍ ၀တ်လဲတော်ပုဆိုးကို လည်း ဃဋိကာရဗြဟ္မာမင်းယူ၍ ဗြဟ္မာ့ပြည်ဝယ် ဒုဿ စေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ထားလေသည်။
THE FUTURE BUDDHA CUTTING HIS HAIR TO BECOME A MONK
Then the Future Buddha seized hold of his top-knot and threw it into the air, saying-"If I am to becomeaBuddha, let it stay in the sky; but if not, let it fall to the ground. And Sakka, the King of the gods, received it inagolden casket, and established it in the Heaven of the Thirty-three Gods as the Culamani Ceti (Shrine of the Diadem). After that, the Future Buddha put on the robes, the symbol of asceticism, brought by the Maha-Brahma god, Ghatikara, and became an ascetic. His garments, made of Benares cloth, were taken away by Ghatikara, and established in the realm of the higher gods as the "Dussa Shirne.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, August 10, 2010 1 comment:
သူတို့ကို အနိုင်ယူချင်တဲ့ စိတ်နဲ့
သူများ အကျိုးစီးပွား ပျက်ဆီးအောင်
ဖျက်ဆီးတာဟာ မကောင်းတဲ့ စိတ်ပဲ
သူတစ်ပါးပေါ် မကောင်းစိတ် မမွေးပါနဲ့ကွယ်။
သူတော်ကောင်းတရား ၊ လက်ကိုင်ထားပြီး
ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ်သွားပါ . . . ကွယ်။
ရေးသားသူ may16 at Saturday, August 07, 2010 12 comments:
နှင်းဆီဆူး(သို့) သစ်ကိုင်းစ စသည့် စူး သွားလျှင်ကို ဆူးကို ညှပ်ခပ်သေးသေးဖြင့် ခပ်ဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်ယူပါ. . အလွန်သေးငယ်သော ဆူးများထွင်ဖို့ ပင်အပ်ဟာ အကောင်းဆုံး တန်ဆာပလာပဲ ဖြစ်ပါတယ်. .
အသားထဲ အတော် နစ်မြုပ်ဝင်နေသော အစအနများကို ထုတ်ယူဖို့အတွက် ကြက်သွန်နီ အကွင်းတစ်ကွင်း (သို့) ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ကွင်းကို သုံးပါ. . . အခြားပစ္စည်းများ အနေဖြင့် ပျားရည်ကို လည်း သုံးနိုင်ပြီး တတိယနည်း အနေဖြင့် ပေါင်မုန့် တစ်ချပ် ၊ နို့အနည်းငယ်ကို သုံးပါ. . .
၄င်းပစ္စည်းများထဲမှ ရရာ တစ်မျိုးမျိုးကို အနာပေါ်တည့်တည့် အုံပေးရပါတယ်. . (သို့) အနာတစ်ဝိုက်မှာ သုတ်လိမ်းပေးရပါမယ်. .. . သုံး၊လေးကြိမ်ခန့် အကြိမ်ကြိမ် လိမ်းပေးပြီးနောက် အကျိုးအပဲ့ ၊ အစအနများသည် အရေပြား အပေါ်ယံသို့ ကြွတက်လာပါလိမ့်မယ်. . .
ထိုအချိန်တွင် အနာတစ်ဝိုက်ရှိ နာ့ဗ်ကြောများ ထုံသွားစေရန် ရေခဲအုပ်ပေး၍ ပိုးသတ်ထားသော အပ်၊ ပင်အပ်၊ ဇာဂနာ စသည်များနှင့် အစအနများကို ဆွဲထုတ်ယူနိုင်ပါသည်. . .
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, August 04, 20104comments:
သူယုတ်မာသည် ထိပ်တင်ခေါင်းရွက် မြှောက်စားခံရသော်လည်း မချေမငံ ဆူဆူညံညံ ပြုတတ်၏။
Do not love the unvirtuous too much.
Even though praised highly, the wicked may act impolitely and boisterously.
မြွေထက် သူယုတ်မာသည် ပို၍ အမျက်လွန်၏။
မြွေကို မန္တာန်ဆေးဝါးဖြင့် ငြိမ်းစေနိုင်သော်လည်း သူယုတ်မာကို ငြိမ်းစေနိုင်သည့် ဆေးမရှိချေ။
The snake is extreme in anger.
The wicked is more furious than the snake.
Though the snake can be subdued by charm and drugs , there is no remedy for subduing of the wicked.
မိမိမိုက်လျက် မိုက်မှန်းသိသူကို ပညာရှိဟု ဆိုအပ်၏။
မိမိမိုက်လျက် ပညာရှိဟု အထင်ရောက်သူကိုမူ သူမိုက်ဟု ဆိုအပ်၏။
One who knows himself of his foolishness, may be said to be the wise.
One who thinks of himself as the wise even though he is foolish may be said to be the foolish.
သူမိုက်သည် သူပြုခဲ့သော မကောင်းမှုများ အကျိုးမပေးသေးသမျှ အကုသိုလ်ကို ပျားရည်ဟု တွေးထင်တတ်၏။
သူပြုသောမကောင်းမှုကြောင့် ဆိုးကျိုးများ ကျရောက်ချိန်တွင်မူကား ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ရတော့၏။
The foolish thinks his evil deeds as honey so long as there occurs no due results for his evil deeds.
When bad results occured due to his evil deeds, then he gets into trouble.
လူမိုက်သည် ခွန်အားရှိလျှင် သူတစ်ပါး ဥစ္စာကို အနိုင်အထက် လုယူတတ်၏။
ပညာနည်းသော ထိုသူမိုက်သည် သေလွန်ပြီးသော် ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။
The fool, if he is stronger, may plunder others possessions by force.
After death that fool of less knowledge lands in hell.
ရေးသားသူ may16 at Monday, August 02, 20106comments: